Bitcoin Cash Wallet - Yakachengeteka uye Yakachengeteka BCH Storage
Kungofanana nemari uye zvimwe zvinyorwa zvese, iwe uchada chikwata chekuchengetedza kweBitcoin Cash yako. Zvisinei, ramba uchifunga kuti crypto yemari haisi kunyatsochengetwa chero kupi zvako, asi zvinoshandisa kiyi yega yega yega yega Bitcoin Cash address yakachengetwa muhomwe yevashandi. Iyo Bitcoin Cash chikwama inobatsira kutumira uye kugamuchira BCH uye inopa kodzero yehuwandisi yehuwandu hwemari.
Bitcoin Cash chikwama chinonziwo chikwama chedigital, chimwe chinhu chinodiwa kana iwe uchida kupinza crypto kubheja kana chero imwe nzira yekubhadhara inosanganisira BCH. Ichi chishandiso chakakosha kune chero munhu anoda kutumira kana kugamuchira Bitcoin Cash. Iko hakuna kudikanwa kwekushushikana sezvo ichipa yakapusa uye nyore matanho evatangi venguva-yekutanga vashandisi vanoda kudzidza chii chinonzi Bitcoin Cash uye kuti ingashandise sei uchishandisa cryptocurrency.
Mushure mekudzidza kuti kutenga uye kutengesa Bitcoin Cash, muitiro wekutevera unotevera unosanganisira kushandiswa kwemunhu kubata bharo ravo reBitcoin Cash. Izvi zvinoreva kusarudza kubva pamhando dzezvikwama zveBCH maererano nezvinodiwa nemushandisi. Pane zvakawanda zvingasarudzwa pazvinouya neBitcoin Cash storage units maiti, kusanganisira desktop wallets, mobile wallets, web wallets, uye hardware wallets.
Kuputsa Bitcoin Cash masikisi
Desktop padlets zvakasungirwa pane kombiyuta yekombiyuta kana kuti laptop uye inopa zvose-incompassing control kune vashandisi vayo. Desktop zvikwereti zvinobvumira vashandi kugadzira kero yeBCH yekutumira uye kugamuchira Bitcoin Cash uye inoshanda sechinhu chekuchengetedza cheki yake yepachivande.
Zvadaro mumutsara zvipfeko zvemashamba, izvo zvinoita kuti zvibatsire zvikuru. Dharirai shanduro pafoni yako ye smartphone kana tablet kuti ugadzire uye uwane iyo akaunti yako. Basa rekushandiswa kwemasipiresi rakafanana neyekodhadhi makanda; nokudaro, kupa shanduro inozivikanwa nekutengesa zvinhu.
IWeb wallet inokubvumira kuti uite BCH kubva chero kupi zvako, pane chero shanduro kana foni. Zvisinei, iwe unofanira kunyatsosarudza shanduro yakatendeseka yewebhu kubva iyo inochengetedza mapeji ako ega ega online.
Pakupedzisira, kune avo vanotarisa kuti vadzike Bitcoin Cash yavo nevanonyanya kuchengetedza zvinhu, Bitcoin Cash hardware chikwama hachina chakanaka pane zvakanakisisa. Mukuwedzera, iyi flash drive-like device inobvumira vashandisi kutakura BCH offline chero nguva uye chero.